My World: ကို့စ်တာကွန်ကော့ဒ်ဒီးယား ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အန္တရာယ်
Posted by PhyoPhyo at Monday, September 16, 2013 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
အီတလီ သင်္ဘောကြီး ကို့စ်တာကွန်ကော့ဒ်ဒီးယား (Costaconcordia )ခရီးစတင် ထွက်ခွာလာစဉ်။ငါးမန်းဖြူကြီးတကောင်လို မြေထဲပင်လယ်တ၀ိုက် လှလှပပ လူးလွန့်် လှုပ်ရှားနေတာပါ။ဖြစ်ချင်တော့…………
၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၃ရက် နေ့က သောင်တင်သွားသော အပျော်စီး သင်္ဘောကြီး ၏ အနီးကပ်မြင်ကွင်း
ဘေးမှ အသက်ကယ်လှေများ ၀န်းရံနေစဉ်
၇၀ ဒီကရီတိမ်းစောင်းနေသော သင်္ဘောကြီး
ရှုဒေါင့်ပေါင်းစုံမှ သင်္ဘောကြီး သောင်တင် နစ်မြုပ်နေပုံ အနေအထား အမျိုးမျိုးကို ခုလို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။သင်္ဘောကို တာဝန်ယူ မောင်းနှင်လာတဲ့ မာလိန်မှူးက “ Francesco Schettino” ဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာ လိုက်ပါသူပေါင်း 4,252 ယောက် ဖြစ်ပြီးခရီးသည်ပါစင်ဂျာချည်း 3,206 ယောက် ပါရှိပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံ လာဇီယိုဒေသ( Lazio) ရှိ စီဗွီတာဗက်ချီယာ(Civitavecchia) မြို့မှ စတင် ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်တယ်။သင်္ဘောဟာ ရေအောက်ကျောက်ဆောင်တခုကို မတော်တဆ တိုက်မိရာကနေ တိမ်းစောင်းသွားတာပါ။ဒေသခံ ကျွန်းသူ ကျွန်းသားတွေကို တလေးတစား ဦးတိုက်နေဟန်ပါပဲ။မာလိန်မှူးကတော့ သူဟာ ရေအောက်ကြမ်းပြင်နဲ့ (ပင်လယ်နဲ့) အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့အတွက် သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါဟာ သင်္ဘောမှာ ပါရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ်ရဲ့ လွဲချော်မှုသာ ဖြစ်တယ် လို့ အခိုင်အမာ ဆိုထားပါတယ်။သင်္ဘောဟာ ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်လိုက်တာကို သူကြားတော့ ရုတ်တရက် ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတယ်။ စက်ခန်းထဲ ရေတွေဝင်လာရော ကျွန်တော့ ခေါင်းထဲမှာ လဲဘာမှမရှိပဲ အသိဥာဏ်ပါ ကင်းမဲ့သွားတယ်။ လို့ ပြောပါတယ်။သင်္ဘောရေယဉ်မှူးဟာ သူ့သင်္ဘောကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။နီးရာ ဆိပ်ကမ်းကို အကူအညီတောင်းပေမဲ့ အဆက်အသွယ်မရဘူး။ ဂီ၈လီယိုကျွန်းဆီကို Uသဏ္ဍာန် နောက်ပြန်လှည့် မကွေ့ခင် (ဂငယ်ကွေ့) ပုံမှန်အနေအထားကို ပြန်ရောက်ဖို့ သူကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သင်္ဘောကြီး တိမ်းစောင်းသွာပြီဆိုကတည်းက သင်္ဘောကို စွန့်ခွာ ထွက်သွားကြဖို့ သူ အမိန့်ပေးရုံပဲ တတ်နိုင်ခဲ့တာပါ.။ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တို့ဟာ ခရီးသည်များရဲ့ အသက်အန္တရယ်ကို အထူးစိုးရိမ်ပြီး သင်္ဘောဆီကို အကူအညီပေးမဲ့သက်ကယ်လှေများစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ ကယ်တင်ချိန်ဟာ (၆)နာရီ ကြာခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသည်အများစုကို ကယ်တင်နိုင်ပေမဲ့ ၃၂ယောက်က သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါဏ်ရာ ရသူပေါင်းက (၆၄)ယောက်ပါ။နှစ်ယောက်က ပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ သေပြီလို့ မှတ်ယူရပါတယ်။
သင်္ဘောကြီးဟာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောတွေအများအပြားထဲမှာ အကြီးဆုံးတခုဖြစ်ပါတယ်။ခုအခါ သူမကို စွန့်ပြစ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာလောကမှာတော့ အခင်းဖြစ်ပွားပြီးကတည်းက သတင်းကြီးနေတာပါ။ သင်္ဘောပေါ်ပါသူ ခရီးသည်များကို သေစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမပါ ပေမဲ့ ခုလို မိမိတာဝန်ယူထားရတဲ့ သင်္ဘောကို မိမိကိုယ်တိုင် မထိမ်းသိမ်းနိုင်ခြင်းဟာ အပြစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်းရဲ့ ကမ်းရိုးတမ်းတလျှောက် ဂီဂလီယိုကျွန်း သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းအ၀င် တောင်ဘက် မီတာ ၈၀၀အကွာမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပဲ့ပိုင်းကိုယ်ထည်မှာ သံအချွန်နဲ့ ခြစ်ဆွဲလိုက်သလို အက်ကွဲကြောင်းရှည်ကြီး နှစ်ခု နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကွဲထွက်ခဲ့တာပါ။ သင်္ဘောစက်ခန်း ဂျင်နရေတာ တွေ ရေမြုပ်ကုန်ပါတယ်။သင်္ဘောဟာ လင်္ကျာဘက်ကို ၂၀ ဒီကရီ တိမ်းစောင်းစပြုလာပါတယ်။သင်္ဘောရေယဥင်္မှူးဟာ အစွမ်းကုန် သူတတ်မြောက်ထားတဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာ နည်းပညာ အားလုံး ထုတ်သုံးသော်လည်း နောက်ဆုံးမှာ သူ လက်လျော့လိုက်ရပါတယ်။ ခရီးသည်များကို ထွက်ခွာသွားဖို့ သူအမိန့်ပေးပါတယ်။တချို့ကလည်း သင်္ဘောကပ္ပိတိန်ဟာ ကံအကြောင်းတရားပဲလို့ သဘောထားပြီး တစုံတရာ အားကြိုးမန်တက် ကြံစီအားထုတ် လုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ ခြားနားစွာ ပြောဆိုမှုလည်းရှိနေတာပါ။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေက ကွာဟမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဗြုံးဗြုံးစားစားကြီး အိမ်မက်ဆန်ဆန် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သင်္ဘောဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရေမှာ တ၀က် နစ်မြုပ်ရင်း တဖြည်းတဖြည်း တစ တစ သိမ်မွေ့စွာ ရေနက်ထဲကို ထိုးဆင်းသွားပါတယ်။လေနှင့် ဒီရေတို့က သင်္ဘော ချက်ခြင်း ရေမြုပ်မသွားအောင် ကူညီ ပံ့ပိုးထားသလို တားဆီးထားမှု ရှိနေပါတယ်။
ဖိတ်စင်ကုန်တဲ့ ရေနံတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ရေနေသတ္တ၀ါ ငါးတွေကို အန္တရယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၂၀၁၂ မတ်လ၂၄ရက်မှာတော့ ရေနံယိုဖိတ်မှုကို ထိမ်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။)
ကို့စ်တာ ကွန်ကော့ဒ်ဒီးယားက တည်ဆောက်ခဲ့ရသမျှ အားလုံး ရေစုန်မှာ မျောပါသွားပြီ လို့ အာမခံကုမ္မဏီကို ကိုးကားပြီး ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သမျှ ဆယ်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် တဲ့။၂၀၁၃ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ အစောဆုံးထားပြီး ပြီးစီးအောင် ဆယ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ပြီးတော့ ကြိုးနဲ့ ဆွဲရပါလိမ့်မယ်။ဒီ ရေမျောကမ်းတင်ကိုယ်ထည်ကြီးကို ဘေးဖယ်ထားရတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ အောက်မေ့ဖွယ် အမှတ်တရ ပစ္စည်းတခုအနေနဲ့ ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောကြီး သောင်တင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ သင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေ ခရီးသည်တွေခမြာ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ သင်္ဘောကို စွန့်ခွာ ထွက်သွားကြရတာပါ။ တချို့က အသက်ကယ်လှေတွေနဲ့ပါ။တချို့က ရေထဲခုန်ချပြီး ကမ်းခြေအရောက် လက်ပြစ်ကူးကြသူတွေနဲ့။ တချို့က ဟယ်လီကော့ပတာတွေ နဲ့ဆူညံပွက်လောရိုက်ပြီး ကစဉ့်ကရဲနဲ့ ပါသွားကြတယ်။အမျိုးအမျိုးပါပဲ။၄၀လောက်က ပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ နောက်နေ့များမှာ တ၀က်လောက်ပြန်ရှာတွေ့ပါတယ်။သင်္ဘောထဲမှာ ခိုကပ်နေကြတာပါ။သေဆုံးကုန်တာလည်းရှိတာပေါ့။
ကက်ပ္ပတိန်က “ ကွန်ပြူတာ ရေကြောင်း အချက်ပြတွေ နဲ့ သတိပေးတပ်လှန့်မှု လုပ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကြမ်းပြင် အနေအထားကို ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။သုံးလေးကြိမ် ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်။ရုတ်တရက် လှိုင်းလုံးကြီးတွေ ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျောက်ဆောင်ပေါ်ကို သဘောင်္ ကိုယ်ထည် ဆွဲချလိုက်သလို ရောက်သွားရတာပါ။ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်လုံးလုံးရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပဲ တရားစီရင် မှာပါ “ လို့ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုပါတယ်။
အစောပိုင် ကနဦးက သူပြောရာမှာ သင်္ဘောဟာ ကမ်းခြေနဲ့ မီတာ ၃၀၀ ပဲ ကွာတယ် တဲ့။(သင်္ဘောရဲ့ အရှည်လောက်ပါ)ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မိတာကို သူ ကောင်းကောင်းအမှတ်ထားမိပုံ မပေါ်ပါဘူး။သင်္ဘောပထမအရာရှိCiro Ambrosio က သူ့ ရေကြောင်းအရာရှိတွေကို ပြောကြားရာမှာ..ကက်ပ္ပိတိန်ဟာ အခန်းမှာ သူ့စာကြည့်မျက်မှန်ကျန်ရစ်ခဲ့လို့ Ambrosio ကို သူ့ကိုယ်စား ရေဒါ စစ်ဆေးခိုင်းခဲ့တယ် တဲ့။မာလိန်မှူးဟာ သင်္ဘောမန်နေဂျာများကို.ပြောရာမှာ ...”၂၀၁၁ခု က အလားတူ ခရီးမျိုး သွားခဲ့တယ်။ Le Scoleကျွန်းအနီးကို မချဉ်းကပ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်းပေါ်မှာ နေ့အချိန် ကျင်းပတဲ့ ပွဲတော်ကို ခရီးသည်တွေ ရောက်ခဲ့တယ်။ပုံမှန်အတိုင်းသင်္ဘောဟာ ၅မိုင်လောက်ပဲ ကမ်းကခွာမောင်းခဲ့တယ်။ခု ၂၀၁၂မှာလည်းအလားတူ ခွာမောင်းခဲ့တာပါပဲ “တဲ့။အဲဒီအချိန်မှာ မာလိန်မှူးဟာ အယင် မာလိန်မှူးဟောင်း မာရီယို ပေါ်လန်ဘို နဲ့ ဖုန်းပြောနေပါတယ်။တီဗွီချနယ်လိုင်း Canale 5မှာ သင်္ဘော မတော်တဆမှု အမေးအဖြေခန်းအကြောင်း ပြောခဲ့ကြတယ်တဲ့။
အဲဒါကများ သူ့စိတ်ကို ချောက်ချားမှု ဖြစ်စေခဲ့သလား။
အခင်းဖြစ်ပွားစဉ် ခရီးသည်တစုဟာ ထမင်းစားခန်းမှာ ရှိနေကြခိုက်ပါ. ဘန်းကနဲ အသံကြီးကိုကြားရော သင်္ဘောဝန်ထမ်းတဦးက အင်တာကွန်ကနေ “ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဒါက လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်သွားလို့ပါလို့ “ အားလုံး အိုကေပါတယ်” တဲ့။လူတွေကို ငြိမ်သက်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သင်္ဘောက လှုပ်ခါနေတယ်။သူတို့ရဲ့ ထိတ်လန့်မှုကို ကြိုးစားထိန်းချုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။
သင်္ဘောတခုခုနဲ့ ဆောင့်မိပြီးနောက်မှာတော့ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်သွားတယ်။ မီးတွေငြိမ်းကုန်ပြီ။တဲ့။ လူသံတွေ ဆူညံလာပြီ။ပြေးကြ လွှားကြ။လဲပြိုကြ။လှေခါးက လိမ့်ကျသွားလိုက်ကြ။ ပုဂံခွက်ယောက်တွေ ကျကွဲ ကုန်ကြ။
အလို. ဒါဟာရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးနေသလား။
.မဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ဘောဟာ ညာဘက်ကို ၂၀ဒီကရီ တိမ်းစောင်းနေပါပြီ။
သင်္ဘောကပ္ပိတိန် ရှက်တီနို က နာရီဝက်အတွင်း သင်္ဘောကို စွန့်ခွာသွားဖို့ အမိန့်ပေးနေပါပြီ။ ခရီးသည်တွေကို တစုတည်းနေဖို့ ညွှန်ကြားတယ်။အသက်ကယ်အင်္ကျီတွေ ၀တ်ထားကြဖို့ ဆော်သြပါတယ်။သက်ကယ်လှေတွေ ပြစ်ချစေတယ်။အီတာလျှံ ဆိပ်ကမ်းအရာရှိတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေစဉ် ကင်းလှည့်ရေယဉ်Guardia de fianza မှ ကို့စ်တာ သင်္ဘောကို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့ မရခဲ့ပါဘူးတဲ့။
ကိုယ်ထည်တွင် ကွဲသွားသော အစင်းချောင်းမီတာ၅၀ (၁၆၄ပေ)ရှည်သည်။
အသက်၅၃နှစ်အရွယ်ရှိ နေပယ်လ်မြို့သားကြီး ကပ္ပိတိန် ရှက်တီနိုဟာ သင်္ဘောကပ္ပိတိန်အဖြစ် (၁၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပီးဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်က သူဟာ AP သတင်းဌာန အဆိုအရ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သင်္ဘောဝန်ထမ်းအားလုံးဟာ အန္တရယ်တခုခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရရင် ခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကြိုတင် လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ကြရပြီး အပတ်စဉ် သင်တန်းတက်ကြရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲ သင်တန်း တက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ မတော်တဆမှုတွေ ကတော့ ရှိနေမှာ အမှန်ပါပဲ။သင်္ဘောကပ္ပတိန် ရှက်တီနို ဟာ ဒီအကြပ်အတည်းမှာ စီမံအုပ်ချုပ်သူအရာရှိထံ သုံးကြိမ်ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မရရှိခဲ့ပါဘူး။တဲ့။ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ထံကိုလည်း ကြိုးဆွဲ လှေကြီး (tug boat)စေလွှတ်ရန် တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး။တဲ့။ သင်္ဘောပေါ်မှာ ခရီးသည်အဖြစ် လိုက်ပါလာသူ ကပ္ပိတိန် “ရော်ဘတ်တို ဘော်ဆီယ” က သင်္ဘောကို စွန့်ခွာထွက်သွားဖို့ “ရှက်တီနို” အမိန့်မပေးခင်ကပင် သူ က ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ရှက်တီနိုဟာ သူ့အရာရှိအချို့နဲ့ အတူ ၂၁း၄၅သင်္ဘောနစ်မြုပ်အပြီး ၂၃း၃၀ နာရီမှာ အသက်ကယ်လှေနဲ့ သင်္ဘောကို စွန့် ခွာ ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ တာဝန်မဲ့ လုပ်ရပ်ကို စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ကမ်းခြေစောင့် သူ့အထက်အရာရှိဟာ သင်္ဘောဆီ သူပြန်သွားရမယ်လို့ မဆိုင်းမတွ အမိန့်ပေးခေါ်ယူလိုက်တယ်။
သူက သင်္ဘောဆီ ပြန်သွားဖို့ကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
(၁) သတ်ရန်ရည်ရွယ်မှုမရှိလင့်ကစား လူသေစေမှု
စတဲ့ စွဲချက်တွေနဲ့ အီတာလျှံ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပင်လယ်ရေကြောင်းဥပဒေအရ တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။
စွဲချက်အားလုံးကို စီရင်ချက်ချမယ်ဆိုရင် အနှစ် ၂၅၀၀ ပြစ်ဒါဏ် ခံရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူ့ကို အကျဉ်းထောင်ကနေ လွှတ်ပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နှင့် လပေါင်းများစွာ ထားရှိခဲ့ပြီးနောက်၂၀၁၂ခု ဇူလိုင်လ ၅ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ် စီရင်ချက်ချ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
(၁) ခရီးသည်များကို စွန့်ခွာချန်ထားခြင်း။
(၂)သက်ဆိုင်ရာဌာနများကို အကြောင်းကြားမှု မရှိခြင်း
စတဲ့ စွဲချက်နှစ်ခု ထပ်တိုးကာ Meta di Sorrento မှာ အမြထာဝရ နေထိုင်ရန် စီရင်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။လူမှုဝန်းကျင် ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိရ။ မိသားစု ထိတွေ့ခြင်းမရှိရ။စတဲ့ ပြစ်ဒါဏ်များလည်းပါရှိတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကပ္ပိတိန်ရဲ့ လျှောက်လဲ ထုခြေချက်တွေဟာ အတော်အသင့် အောင်မြင်ခဲ့တယ် ပြောရမှာပါ။
(ကမ္ဘာကျော် တိုင်တဲနစ်ကားမှာတော့ သင်္ဘောကပ္ပိတိန်ဟာ သူ့သင်္ဘောနှင့်အတူ ရှိနေခဲ့တာပါ။ ပြစ်ခွာ စွန့်ထားခြင်း မရှိဘူး။
၂၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၃၁ရက်နေ့မှာ UK ချာနယ်4မှနေ ကို့စတာကွန်ကော့ဒ်ဒီးယား ရေအောက် နစ်မြုပ်ခြင်းကို ပြသခဲ့တယ်။ခရီးသည်တယောက်က ဗွီဒီယို မှတိတမ်းရိုက်ကူးရာမှာ သင်္ဘောဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ “ အရာရာ ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာရှိနေပါတယ်။ခရီးသည်များ ကိုယ့်အခန်းကိုပြန်သွားကြပါ “လို့ ပြောဆိုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ခန့်မှန်း ခရီးသည် ၆၀၀ လောက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး လူ၃၀၀လောက်က အသက်ကယ်လှေ မရရှိပါဘူး။သက်ကယ်လှေများဟာလည်း စွန့်စွန့်စားစား ပြစ်ချပေးရတာပါ။
ခရီးသည်တွေ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ (documentary) ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းများကို အခြေခံပြီး ရုပ်မြင်သံကြားတွေက တမိနစ်ပြီးတမိနစ် ဆက်တိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တယ်။ကမ်းခြေစောင့် အရာရှိနဲ့ သင်္ဘောကပ္ပိတိန်တို့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုသံတို့ကို ဟယ်လီကော့ပတာမှ လေယာဉ်မှူးက အသံဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။”ကြောက်စရာ့ ပင်လယ်တွင်း မြင်ကွင်း”” ကင်မရာ မြင်ကွင်း” “ကို့စ်တာ ကွန်ကော့ဒ်ဒီးယား နစ်မြုပ်ခြင်း “ “ ကြမ္မာငင်သော ည တည” “ပျော်စရာတွေနဲ့ ရောထွေးနေတဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း “ကြေကွဲဖွယ် ပြဇတ်တပုဒ် ခင်းကျင်း ပြသခဲ့” စသဖြင့်အမျိုးမျိုး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြား တို့က မပြတ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်။ဝေဖန်ချက်တွေလည်း အတော်လေးများပြားခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာလောက မှာတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ဂယက်ထသွားစေခဲ့တဲ့ သတင်းတပုဒ်ဖြစ်ကြောင်း မျှဝေ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ။